Abangu-7 kwabangu-10 baseSingapore basafuna ukuhamba ngo-2020
Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Izwe | Isifunda » Singapore » Abangu-7 kwabangu-10 baseSingapore basafuna ukuhamba ngo-2020
Imiphumela ye-Travel Intent Survey 2020, eyahlaziya okuthunyelwe-Covid-19 izinhloso zokuhamba zabantu baseSingapore abangu-6,000, zishicilelwe namuhla. Ucwaningo kuhloswe ngalo ukuqonda umbono wokubuyiswa kohambo kanye nezinguquko ekuziphatheni kwabantu baseSingapore ngenxa yalolu bhubhane.
Indawo yokuqala yokuhambela
Ngenkathi engaphansi kwezinyanga eziyisithupha kuze kuphele unyaka, okungaphezudlwana kwengxenye yabaphenduli (ama-6%) bakhombisile ukuthi bazohamba ngo-54 ngokushesha lapho imikhawulo yezokuvakasha iphakama. Abanye abangu-2020% baseSingapore bazolingeka ukuba bahambe ngo-20 uma kukhona ukukhushulwa okukhangayo, okuphakamisa ukuthi kokubili imikhawulo yemingcele kanye namanani kukhuthaza ukutholakala kohambo. Phakathi kwabantu baseSingapore abanezinhloso zokuhamba ngokushesha kungakapheli unyaka we-2020, izihambi zeminyaka eyizinkulungwane ezineminyaka engama-2020 kuya kwengama-25 ubudala yizona ezaziwa kakhulu (34%). Ngokuqhathanisa, bangu-35% kuphela babahambi abaneminyaka engama-22 kuya kwengama-35 no-44% wabahambi abaneminyaka engama-11 kuya kwengama-55 ubudala abalindele ukuhamba kungakapheli unyaka.
Amazwe athandwayo athanda Japan (23%), Thailand (12%), futhi Malaysia (11%) bahlala bekhetha okuphezulu kwabaseSingapore, kulandele Australia (8%), INingizimu Korea (7%), Taiwan (6%), Izwekazi China (5%), E-New Zealand (4%), Indonesia (4%), futhi Vietnam (2%). Ngokuqondene namazwe e-COVID-19 hotspot, ama-25% ngaphezulu abantu baseSingapore bazimisele ukuya lapho engxenyeni yokuqala ka-2021 (40%) ngokuqhathaniswa nango-2020 (15%), okukhombisa ukubuyiswa kancane kancane kwezokuvakasha emazweni athinteke kakhulu.
Okujwayelekile Okujwayelekile Ekuhambeni
Njengesibonakaliso sesidingo sokuhamba sokuhamba, ama-85% abantu baseSingapore bakulungele ukusebenzisa imali ethe xaxa eholidini labo elilandelayo. Abangu-4 kwabayishumi baseSingapore bazimisele ukwenza isabelomali esingu-10% noma ngaphezulu ngezinhlelo zabo zokuhamba ezizayo njengendlela yokunxephezela amapulani akhanseliwe phambilini.
Isikhulu Sezomnotho esivela ku-International Air Transport Association (IATA), UBrian Pearce ilinganisela ukuthi kuzobiza amathikithi endiza Ama-43% kuya kuma-54% ngaphezulu kunezintengo zangaphambilini ngenxa yezinqubomgomo ezindizayo zokundiza kwezenhlalo. Yize abaseSingapore bezwakalise intshisekelo yabo ngeholide labo elizayo, iningi labo liqhutshwa yinani uma kukhulunywa ngezindleko zokuhamba. U-72% wabaphendulile uthe bazovinjelwa amanani entengo aphezulu wamathikithi endiza futhi bazolinda amanani entengiso ngaphambi kokwenza izinhlelo zabo zokuhamba.
Lokhu kufakazelwa ngama-58% wabaphenduli abathi amanani entengo okukhangisa azobaheha ukuthi baqhubeke nokuhamba ngo-2020, kuphinde kuphakamise ukuthi abantu baseSingapore baqhutshwa yinani. Ukukhushulwa kwe- “Pay Now, Travel Later” kubonakala kuyindlela esebenzayo kubantu baseSingapore, njengoba ngaphezu kuka-70% kukhombisa ukuthi bazothanda ukuthenga uma izaphulelo okungenani zinentengo uhhafu noma ngaphezulu. Ezinye izinto ezingaba nomthelela ekuthengeni kwabo zifaka phakathi ukuguquguquka kokuhlala nokufanelekela ukubuyiselwa imali okugcwele.
Ezinye izindlela zokuHlela
Ngenxa yezinhlelo zokuhamba ezikhanseliwe ngo-2020, ama-28% abaphendulile athi bazokonga imali esikhundleni salokho. Ukuhlala kwasendaweni (i-15%), ukuthenga (i-14%), nokuvakashela izivakashi zendawo (i-5%) kungezinye izinketho zabaseSingapore.
Australia UBrian Pearce China Covid-19 Indonesia I-International Air Transport Association Japan Korea I-Mainland China Malaysia E-New Zealand INingizimu Korea Taiwan Thailand Ezokuthutha Vietnam
INyakatho Melika yakha ingxenye yesithathu yamadolobha abiza kakhulu emhlabeni
I-Antigua neBarbuda ivuselela ukwelulekwa kwayo kwezokuvakasha
I-Labyrinth Enkulu Kunazo Zonke Emhlabeni Izovulwa Kabusha
Amalungiselelo eNgqungquthela Yezindawo Zamahhala Zomhlaba Ephezulu...
Inketho Yokwelapha Okungahlinzeki Manje Yesikhumba Esivamile...
Izwe lokuqala lase-US livala inketho engenabulili ekuzalweni...